ပြင်ဆင်ချိန်မရလိုက်! ပလာကျင်ဘူလီစက်ရုံတရုံ အလုပ်သမားများအဖမ်းခံရ – Myanmar Live
ဘန်ကောက်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက် / သတင်းများ / မြန်မာ
ပြင်ဆင်ချိန်မရလိုက်! ပလာကျင်ဘူလီစက်ရုံတရုံ အလုပ်သမားများအဖမ်းခံရ
September 18, 2018 - by lyju
U Zaw Tika ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်က ပလာကျင်ဘူရီရဲစခန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖမ်းဆီးခံရသည့် မြင်ကွင်းကို တင်ပြထားပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ 16 ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမား အရေအတွက်မှာ 60 ဦးခန့်ရှိပါတယ် ပတ်စပို့ရှိသူများနှင့် အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်ရှိသူများလည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်
တရားဝင်အလုပ်သမား အဖမ်းခံရသူ Thant Zin Aung က Myanmar Live သတင်းဌာနကို ပြောကြားချက်အရ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ 16 ရက်နေ့က တာဝန်ရှိသူများ မြန်မာနိုင်ငံသား 60 ဦး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ပလာကျင်ဘူလီခရိုင်ရှိ တာယာစက်ရုံတခုကို ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ် ထိုအချိန်တွင် စက်ရုံပိုင်ရှင်ကလည်း စက်ရုံတွင်မရှိသည့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ 18 ရက်နေ့တွင် အဖမ်းခံထားရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား 20 ဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ် လွတ်မြောက်လာသည့်သူများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ရောက်လာပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ် မလွတ်မြောက်သေးသည့် 40 ဦးမှာ မနက်ဖြန် စက်ရုံပိုင်ရှင်က အာမခံဖြင့် ထုတ်ပေးမည်ဟု ဆိုပါတယ် အချို့သောအလုပ်သမားများမှာ စာရွက်စာတမ်း မပြည့်စုံ မမှန်ကန်သောကြောင့် အကုန်လွတ်မြောက်မည်ဟု အတည်ပြု မပြောနိုင်သေးပေ။
ဓါတ်ပုံများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် U Zaw Tika
TaggedMyanmarMyanmar live newsMyanmar newsข่าวสารเมียนมาแรงงานแรงงานเมียนมาအလုပ်သမားရေးရာသတင်း
လူကုန်ကူးခံရသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်ကို ရဲများဝင်ရောက်ကယ်ထုတ် !!
မြန်မာ လာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလုပ်သားများအတွက်ဘယ်လိုအဖြေထွက်မလဲ? ထိုင်းအစိုးရမှအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးအဖြေရှာနေ
၂၀၁၈ တွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း အလုပ်သမား ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ လစာတိုးမြှင့်ရရှိဟုဆို
Previous Article မီးဖိုချောင်ထဲက ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ ‘မျက်နှာအဆီပြန်လျှော့ချနည်း’5နည်း
Next Article မြေလှန်ရှာပြစ်မယ်! အကျဉ်းထောင်ဖောက်ပြီး ရှောင်တိမ်းသည့် မြန်မာအကျဉ်းသားများအား တာဝန်ရှိသူများ လိုက်လံဖမ်းဆီး2ဦး အဆုံးစီရင်!!